Banijya News | » संरक्षणको पर्खाइमा ५५ झ्याले दरबारः कहिले होला पुर्ननिर्माण ? संरक्षणको पर्खाइमा ५५ झ्याले दरबारः कहिले होला पुर्ननिर्माण ? – Banijya News
संरक्षणको पर्खाइमा ५५ झ्याले दरबारः कहिले होला पुर्ननिर्माण ?
सिहंदरबारको झल्को दिने दाङमा रहेको भवन संरक्षण अभावले जीर्ण बनेको छ। ५५ झ्याले दरबारको रूपमा चिनिने यस भवन संरक्षणको अभावले जीर्ण बन्दै गएको हो। दाङको गढवा गाउँपालिका ६ गोबरडियामा अवस्थित उक्त दरबारलाई एक सय ५० वर्ष अगाडी बनेको मानिन्छ । सो दरबारले दाङ जिल्लाको मात्र नभई देशकै अस्तित्व र पहिचान बोकेको थियो ।
स्थानिय जानकारहरुका अनुसार, राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति परशुनारायण चौधरीका पिता जोखनप्रसाद चौधरीले विक्रम सम्वत १९ सय ४८ मा बनाएका हुन् । उनले भारतको गोरखपुरबाट कालिगढ झिकाएका थिए । यो दरबार बनाउन १० वर्ष लागेका थियो । मासको पीठो, पिसिएको ढुङ्गा, बालुवा, सुर्कि प्रयोग गरी बनाइएको यो भवन पुरानो भएकाले र उचित संरक्षणको अभावमा दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ ।
भवनमा ५५ झ्याल र भवनको चौखण्डमा सिंहको आकृति बनाएर सिंहदबारको नक्क्कल गरेको भन्दै तत्कालीन राणा शासकले भवन बनाउने जोखनप्रसादमाथि सार्वजनिक मुद्दासमेत चलाएका थिए।
यो दरबार वातावरणमैत्री छ। दरबारको बीच भाग खुला छाडिएको छ। अरू कोठा काष्ठ कलाकौशलले सिँगारिएका छन् । भवनको स्वरुप राजामहाराजा बस्ने दरबार जस्तै छ । संरचनामा कुमारीघरको समेत झल्को देखिन्छ । हनुमानढोका दरबारमा भए जस्तै काष्ठकला त्यसमा देखिन्छ ।
अहिले सँरक्षणको अभावमा दरबारमा भएका कोठाको भित्री भाग समेत बिग्रन थालेको छ । दरबारका कोठाहरूमा झार पलाउन थालेको छ भने काठ धमिराले खान थालेको छ। भवनमा प्रयोग गरिएका काष्ठकला अझै बिग्रेको छैन । यसको संरक्षण भने भएको छैन । देउखुरीको सो ऐतिहासिक धरोहरलाई बाहिर चिनाउन कतैबाट पहल भएको छैन ।
नेपाल सरकार, पुरातत्व विभागले १०० वर्ष पुराना ऐतिहासिक धरोहरलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ। त्यति हुँदा हँुदैपनि पुरातत्व विभागले एकपटक निरीक्षण गर्नुबाहेक यहाँ केही गरेको छैन। पुरातात्विक इतिहाससँगै ऐतिहासिक संस्कृति झल्काउने , पर्यटक स्थलको गन्तव्य को रुपमा चिनाउने, नेपालको पहिचान बोकेको ५५ भ्याले दरबारको संरक्षणमा राज्यको ध्यान कहिले आकर्षण होला?